नेपालमा नहुने भयो एमसिसी पास, उल्टै अमेरिकासँग यस्तो जवाफ मागेपछि देउवा सरकारको हाईहाई ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ राजनीति/नेपालमा नहुने भयो एमसिसी पास, उल्टै अमेरिकासँग यस्तो जवाफ मागेपछि देउवा सरकारको हाईहाई !
त्यस्तै यसको अडिटिङमा अमेरिकाको अधिकार रहने भनी गरिएका दाबीहरुमाथि पनि प्रश्नहरु उठेका छन्।पछिल्लो समयमा एमसिसी पारित नगर्न सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब परिरहेको छ भने सरकार एमसिसी पारित गर्ने तयारीमा देखिएको छ।
अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एमसिसीमा संशोधन नहुने यसअघि स्पष्ट पारेका छन्। एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमर सरकारलाई यसको अनुमोदनका लागि आग्रह गर्दै अर्को साता नेपाल आउँदै छिन्।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेट्ने तय भएको छ।
कांग्रेस नेता मोहन कुमार माथेमाका श्रीमती ल्याइन् सर्वाधिक मत, कांग्रेसको प्रदेश २ मा देउवा पक्षकै दबदबा